မိဘမဲ့ကျောင်းများသို့ ပေးကမ်းလှူတမ်းမယ့်သူများ ဒီပို့လေးကို ကြည့်သွားကြပါလို့ ရင်နင့်စွာနဲ့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ – myanmar news
တကယ်ကို ရင်ထဲမှာနင့်နေအောင် ခံစားသွားမိပါတယ်..။ ကိုယ်တိုင်တကယ်လည်း နောင်တရမိအပါတယ်..။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မိဘမဲ့ကျောင်းတစ်ခုမှာ အလှူငွေများ သွားရောက်လှူတန်းခဲ့ပါတယ်..။
သွားရောက်လှူတန်းတဲ့ အချိန်က နေ့လည်ပိုင်း ကျောင်းသားတွေထမင်းစားချိန် ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့လေးတွေ ထမင်းစားဖို့တန်းစီ လက်အုပ်လေးတွေ ချီပြီး လာရောက်လှူတန်းသူများကို မေတ္တာပို့နေကြချိန်မှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့မိတယ်..။
ရိုက်တုန်းကတော့ ကိုယ့်အလှူ ကိုယ့်ပီတိနဲ့ပဲ.. အခု အောက်မှာ ပါတဲ့ အမတစ်ယောက်ရေးထားတဲ့ ပို့တစ်ခုကို ဖတ်ကြည့်လိုက်မိတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော် တော်တော်ကြီး နောင်တရမိတယ်..။
ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့လေးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကို ကျွန်တော် ထည့်မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး..။ အခုမှ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်..။ သူတို့စိုးရိမ်ကြမှာပဲဆိုတာ…
သူတို့ပုံတွေ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ တင်မှာကို သူတို့ စိုရိမ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ့..။ နောက်နောင်များ ဒီလို အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ရလေအောင် အောက်မှာ အမတစ်ယောက်ရေးတင်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးနဲ့ တွဲပြီး ကျွန်တော် ဒီပို့လေးနဲ့ သာဓက အဖြစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…။
အလှူရှင်များ လှူတဲ့ အခါတိုင်း ဒီပို့လေးကို သတိတရရှိကြပါစေလို့ လေးစားစွာဖြင့် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်နော်..။
သူတစ်ပါးကို ပေးဆပ်တော့မယ်ဆိုရင် . . .
လူအများစုဟာ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတွေမှာ မကြာခဏ လှူတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း လှူဖူးပါတယ်။ ကလေးတွေကို ချစ်တဲ့ စိတ်ရယ်၊ မိဘမဲ့လေးတွေမို့ သနားတဲ့ စိတ်ရယ်နဲ့ပေါ့ . .
နောက်ဆုံး လှူတဲ့ တစ်ခေါက်ကဆိုရင် ကျွန်မ တူလေးနှစ်ယောက်ကိုပါ သူတို့နဲ့ ရွယ်တူ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို ပဲနို့နဲ့ ပေါင်မုန့် လေးတွေ ပေးခိုင်းခဲ့တယ်။
ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာတော့ ကျွန်မတူလေးတွေဟာ ပေးဆပ်ခြင်းရဲ့ ပီတိ၊ မျှဝေခြင်းရဲ့ ကြည်နူးမှုကို ခံစားတတ်သွားရင် သူတို့ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး ကိုယ့်ထက် ချို့တဲ့တဲ့သူတွေကို ဖေးမစာနာတတ်သွားမယ်ပေါ့ . .
တူလေးတွေ လှူတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ပေးမိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တော့ မတင်ခဲ့မိပါဘူး . . ဓာတ်ပုံထဲမှာ ကျွန်မတူလေးတွေက သူတစ်ပါးကို ပေးရတဲ့အတွက် ပြုံးပျော် ကြည်နူးလို့ပေါ့ . .
အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကို သူတို့တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ကြီးလာတဲ့အခါ ပြန်ပြပြီး “အဲဒီလို လှူချင်ရင် မုန့်ဖိုးတွေ စု . . မလိုအပ်တဲ့ အရုပ်တွေ လျှောက်မ၀ယ်နဲ့” စသဖြင့် ပြောပြမိတယ်။
တူလေးတွေ လှူတဲ့ပုံတွေကို ကြည့်တိုင်း ကျွန်မရော တူလေးတွေပါ တူလေးတွေဆီပဲ အကြည့် ရောက်ပါတယ် . . တစ်ဖက်က လက်ခံရယူတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ပုံတွေကို ကြည့်မိသလား၊ မကြည့်မိသလား . . အမှတ်မဲ့ပါပဲ . .
ဒီနေ့တော့ ကျွန်မ မသန်စွမ်းပေမယ့် ဘွဲ့ရတဲ့ အထိ ပညာသင်ယူနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံပါတယ်။ သူက မိဘမဲ့တစ်ယောက်ပါ။
“အစ်ကို ဒီလို ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ အခက်ခဲဆုံး ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ခံစားချက်က ဘာဖြစ်မလဲ”လို့ ကျွန်မ မေးကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်က မိဘမဲ့ဆိုတော့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းတစ်ခုမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းမှာ အလှူရှင်တွေ လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေ တန်းစီပြီး အလှူရှင်တွေ ပေးတဲ့ မုန့်တွေ၊ အအေးတွေကို ယူရပါတယ်။
အလှူရှင်တွေကတော့ စေတနာနဲ့ ပေးပေမယ့် ကျွန်တော် အင်မတန် သိမ်ငယ်ပါ တယ်။
ကျွန်တော် ဘုန်းကြီး ရိုက်မှာစိုးလို့ တန်းစီခဲ့ရ တာပါ၊ ကျွန်တော် အဲဒီမုန့်တွေကို လုံးဝ မယူချင်ပါဘူး၊ အဆိုးဆုံးက အလှူရှင်မိသားစုထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူကလေးတွေများ ပါခဲ့ရင်လေ . .
(သူ့မျက်နှာက အတော်ဆွေးမြေ့သွားတဲ့ ပုံနဲ့ပါ) ကျွန်တော် အဲဒီ့သိမ်ငယ်စိတ်ကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့ရတာ အခက်ခဲဆုံးပဲဗျာ”တဲ့ . .
သူ့စကားဆုံးတော့ ကျွန်မ တော်တော် မျက်နှာ ပူသွားပါတယ်။
“အဲဒီတုန်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မပေါ်သေးလို့ တော် သေးတာပေါ့ဗျာ၊ အခုခေတ်မှာ အဲဒီလှူတဲ့ပုံတွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ တွေ့တိုင်း မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုယ်စား ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ”
မိဘမဲ့ကြောငျးမြားသို့ ပေးကမျးလှူတမျးမယျ့သူမြား ဒီပို့လေးကို ကွညျ့သှားကွပါလို့ ရငျနငျ့စှာနဲ့ အကွံပွုအပျပါသညျ။
တကယျကို ရငျထဲမှာနငျ့နအေောငျ ခံစားသှားမိပါတယျ..။ ကိုယျတိုငျတကယျလညျး နောငျတရမိအပါတယျ..။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကပဲ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ မိဘမဲ့ကြောငျးတဈခုမှာ အလှူငှမြေား သှားရောကျလှူတနျးခဲ့ပါတယျ..။
သှားရောကျလှူတနျးတဲ့ အခြိနျက နလေ့ညျပိုငျး ကြောငျးသားတှထေမငျးစားခြိနျ ဖွဈတဲ့ အတှကျ သူတို့လေးတှေ ထမငျးစားဖို့တနျးစီ လကျအုပျလေးတှေ ခြီပွီး လာရောကျလှူတနျးသူမြားကို မတ်ေတာပို့နကွေခြိနျမှာ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျပဲ ဖုနျးနဲ့ ဓာတျပုံရိုကျခဲ့မိတယျ..။
ရိုကျတုနျးကတော့ ကိုယျ့အလှူ ကိုယျ့ပီတိနဲ့ပဲ.. အခု အောကျမှာ ပါတဲ့ အမတဈယောကျရေးထားတဲ့ ပို့တဈခုကို ဖတျကွညျ့လိုကျမိတဲ့ အခါမှာ ကြှနျတျော တျောတျောကွီး နောငျတရမိတယျ..။
ကြှနျတျော ဓာတျပုံရိုကျနတေဲ့ အခြိနျမှာ သူတို့လေးတှရေဲ့ခံစားခကျြတှကေို ကြှနျတျော ထညျ့မစဉျးစားခဲ့မိဘူး..။ အခုမှ ပွနျစဉျးစားမိတယျ..။ သူတို့စိုးရိမျကွမှာပဲဆိုတာ…
သူတို့ပုံတှေ ဖဘေု့တျပျေါမှာ တငျမှာကို သူတို့ စိုရိမျကွလိမျ့မယျဆိုတာပေါ့..။ နောကျနောငျမြား ဒီလို အဖွဈမြိုး မဖွဈရလအေောငျ အောကျမှာ အမတဈယောကျရေးတငျထားတဲ့ အဖွဈအပကျြလေးနဲ့ တှဲပွီး ကြှနျတျော ဒီပို့လေးနဲ့ သာဓက အဖွဈတငျပေးလိုကျပါတယျ…။
အလှူရှငျမြား လှူတဲ့ အခါတိုငျး ဒီပို့လေးကို သတိတရရှိကွပါစလေို့ လေးစားစှာဖွငျ့ တိုကျတှနျးအပျပါတယျနျော..။
သူတဈပါးကို ပေးဆပျတော့မယျဆိုရငျ . . .
လူအမြားစုဟာ မိဘမဲ့ကလေးကြောငျးတှမှော မကွာခဏ လှူတတျပါတယျ။ ကြှနျမလညျး လှူဖူးပါတယျ။ ကလေးတှကေို ခဈြတဲ့ စိတျရယျ၊ မိဘမဲ့လေးတှမေို့ သနားတဲ့ စိတျရယျနဲ့ပေါ့ . .
နောကျဆုံး လှူတဲ့ တဈခေါကျကဆိုရငျ ကြှနျမ တူလေးနှဈယောကျကိုပါ သူတို့နဲ့ ရှယျတူ မိဘမဲ့ကလေးတှကေို ပဲနို့နဲ့ ပေါငျမုနျ့ လေးတှေ ပေးခိုငျးခဲ့တယျ။
ကြှနျမ စိတျထဲမှာတော့ ကြှနျမတူလေးတှဟော ပေးဆပျခွငျးရဲ့ ပီတိ၊ မြှဝေခွငျးရဲ့ ကွညျနူးမှုကို ခံစားတတျသှားရငျ သူတို့ဘ၀ တဈလြှောကျလုံး ကိုယျ့ထကျ ခြို့တဲ့တဲ့သူတှကေို ဖေးမစာနာတတျသှားမယျပေါ့ . .
တူလေးတှေ လှူတဲ့အခါ ဓာတျပုံတှေ ရိုကျပေးမိတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ဖစျေ့ဘှတျချပျေါတော့ မတငျခဲ့မိပါဘူး . . ဓာတျပုံထဲမှာ ကြှနျမတူလေးတှကေ သူတဈပါးကို ပေးရတဲ့အတှကျ ပွုံးပြျော ကွညျနူးလို့ပေါ့ . .
အဲဒီဓာတျပုံတှကေို သူတို့တဈနှဈထကျ တဈနှဈ ကွီးလာတဲ့အခါ ပွနျပွပွီး “အဲဒီလို လှူခငျြရငျ မုနျ့ဖိုးတှေ စု . . မလိုအပျတဲ့ အရုပျတှေ လြှောကျမ၀ယျနဲ့” စသဖွငျ့ ပွောပွမိတယျ။
တူလေးတှေ လှူတဲ့ပုံတှကေို ကွညျ့တိုငျး ကြှနျမရော တူလေးတှပေါ တူလေးတှဆေီပဲ အကွညျ့ ရောကျပါတယျ . . တဈဖကျက လကျခံရယူတဲ့ ကလေးတှရေဲ့ ပုံတှကေို ကွညျ့မိသလား၊ မကွညျ့မိသလား . . အမှတျမဲ့ပါပဲ . .
ဒီနတေ့ော့ ကြှနျမ မသနျစှမျးပမေယျ့ ဘှဲ့ရတဲ့ အထိ ပညာသငျယူနိုငျတဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ ဆုံပါတယျ။ သူက မိဘမဲ့တဈယောကျပါ။
“အဈကို ဒီလို ဘှဲ့ရတဲ့အထိ ဖွတျသနျးလာတဲ့ ဘ၀တဈလြှောကျမှာ အခကျခဲဆုံး ဖွတျကြျောခဲ့ရတဲ့ စိတျခံစားခကျြက ဘာဖွဈမလဲ”လို့ ကြှနျမ မေးကွညျ့မိလိုကျပါတယျ။
“ကြှနျတျောက မိဘမဲ့ဆိုတော့ ဘုနျးကွီး ကြောငျးတဈခုမှာ ကွီးပွငျးခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီကြောငျးမှာ အလှူရှငျတှေ လာပွီဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့တှေ တနျးစီပွီး အလှူရှငျတှေ ပေးတဲ့ မုနျ့တှေ၊ အအေးတှကေို ယူရပါတယျ။
အလှူရှငျတှကေတော့ စတေနာနဲ့ ပေးပမေယျ့ ကြှနျတျော အငျမတနျ သိမျငယျပါ တယျ။
ကြှနျတျော ဘုနျးကွီး ရိုကျမှာစိုးလို့ တနျးစီခဲ့ရ တာပါ၊ ကြှနျတျော အဲဒီမုနျ့တှကေို လုံးဝ မယူခငျြပါဘူး၊ အဆိုးဆုံးက အလှူရှငျမိသားစုထဲမှာ ကိုယျနဲ့ ရှယျတူကလေးတှမြေား ပါခဲ့ရငျလေ . .
(သူ့မကျြနှာက အတျောဆှေးမွသှေ့ားတဲ့ ပုံနဲ့ပါ) ကြှနျတျော အဲဒီ့သိမျငယျစိတျကို ရငျဆိုငျကြျောလှားခဲ့ရတာ အခကျခဲဆုံးပဲဗြာ”တဲ့ . .
သူ့စကားဆုံးတော့ ကြှနျမ တျောတျော မကျြနှာ ပူသှားပါတယျ။
“အဲဒီတုနျးက ဖစျေ့ဘှတျချမပျေါသေးလို့ တျော သေးတာပေါ့ဗြာ၊ အခုခတျေမှာ အဲဒီလှူတဲ့ပုံတှကေို ဖစျေ့ဘှတျချမှာ တှတေို့ငျး မိဘမဲ့ကလေးတှကေိုယျစား ကြှနျတျော စိတျမကောငျးဘူးဗြာ”
Author admin 1Posted on March 12, 2018 Categories Uncategorized
Previous Previous post: ​မိဘမဲ့ကျောင်းများသို့ ပေးကမ်းလှူတမ်းမယ့်သူများ ဒီပို့လေးကို ကြည့်သွားကြပါလို့ ရင်နင့်စွာနဲ့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
Next Next post: ​သင့်ချစ်သူ သင့်ဇနီးထံမှာ ဒီအချက် ၈ ချက် ရှိနေရင် သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်